China Marine Pneumatic Rubber Fender Yokohama Type Floating Dock Bumpers စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Haohang
အဏ္ဏဝါအဆိုးရော်ဘာအကာအရံ Yokohama အမျိုးအစား Floating Dock Bumpers
၁။ စွမ်းအင်မြင့်မားစွာစုပ်ယူနိုင်ခြင်း ၂။ တုံ့ပြန်မှုစွမ်းအားနိမ့်ကျခြင်း ၃။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဉ်အတွင်းအဆက်အသွယ်ကောင်းသည်။ ၄။ ရာဘာအဆုတ်အအေးခံကိရိယာသည်ရေပေါ်မျောပါလိမ့်မည်။
function ကို မက်စ်ကာကွယ်မှုပေး
MOQ 1 သတ်မှတ်မည်
လက်မှတ် CE BV ISO
Supply နိုင်ခြင်း တစ်နေ့လျှင် 1000 Piece / အပိုင်းပိုင်း
ထုပ်ပိုးအသေးစိတ် Seaworthy ကွန်တိန်နာထုပ်ပိုး
အရေအတွက် (အပိုင်းပိုင်း) 1 - 1 ၂ - ၁၀ ၁၁ - ၁၀၀ > 100
အီးအက်စ်တီ။ အချိန် (နေ့များ)35 60 ညှိနှိုင်းခံရဖို့
Qingdao Haohang Fender Airbag Co. , Ltd. သည် Shandong ပြည်နယ်၊ Qingdao၊ Jimo ခရိုင်၊ ၁၇၆၀ # Yanqing Rd တွင်တည်ရှိသည်။
အဆိုးရွားဆုံးရေပေါ်အကာအရံ, လှေအကာအရံ, ဓာတ်ငွေ့လေအိတ်, ပိုက်လိုင်း Airbag etc
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များအားလုံးကို CCS, BV, ABS, SGS စသည်ဖြင့်အတည်ပြုထားပါသည်။
၎င်းသည်မြင့်မားသောခွန်အားနှင့်မြင့်မားသောအကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးစနစ်ဖြစ်သည်။ ရော်ဘာအကာအရံများသည်ကွင်းဆက်ကွန်ယက်အမျိုးအစား၊ ကြိုးကွန်ယက်နှင့်ရော်ဘာဖျာအမျိုးအစားများရှိသည်။
ကြိုးကွန်ယက်သို့မဟုတ်ကြိုးပိုက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအကာအရံစသည်တို့ကိုကွင်းဆက်ကွန်ယက်များသည်ချေးယူခြင်းကိုကြာရှည်ခံနိုင်ပြီးအများအားဖြင့်အသုံးပြုသောတာယာများနှင့်ရာဘာအင်္ကျီများဖြင့်တည်ဆောက်ကာထပ်ဆောင်းကာကွယ်မှုပေးသည်။ ဖိုင်ဘာပိုက်ကွန်များသည်ရော်ဘာလက်များကိုသာအသုံးပြုသည်။ ဝါယာကြိုးများသည်အလင်း ဖြစ်၍ အလွယ်တကူပြုပြင်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွင်းဆက်တွင်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ကိုခံနိုင်ပြီးပင်လယ်ဆန့်ကျင်တိုက်စားခြင်း၏လက္ခဏာရှိသည်။ ကွင်းဆက်အားလုံးသည်သွပ်ဖြင့်သွပ်သွင်းခြင်းကိုကုသသည်။ ငါတို့သည်လည်း Chain ကိုအစားထိုး PP မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆကြိုးရှိသည်။ ဤကြိုးသည် anti-uv၊ ပင်လယ်ဆန့်ကျင်ရေ၊ တိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်ချေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
အချင်း ၀.၂ မီတာမှ ၅ မီတာအကြား ၀.၅ မီတာမှ ၁၂ မီတာအထိရှိသည်။
pneumatic fenders ကို inflatable fenders ဟုလည်းခေါ်သည်။
စွမ်းအင်ကိုစုပ်ယူခြင်းသည် pneumatic Rubber fender ၏အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များဖြစ်သည်။ သင်္ဘောတန်ချိန်တိုးလာသည်နှင့်အမျှကမ်းခြေနှင့်အခြားရေယာဉ်များကိုဆက်သွယ်သောသင်္ဘော၏သက်ရောက်မှုစွမ်းအင်သည်ဆိုက်ကပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အဆတိုးများလာသည်။ ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုစွမ်းအင်ကိုအကာအရံနှင့်ပုံသဏ္contactာန်လုံလောက်စွာပုံသဏ္byာန်ပျက်ခြင်းကြောင့်စုပ်ယူရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ pneumatic fender compression ပုံသဏ္formationာန်သည် ၆၀% ကျော်နိုင်ပြီးထိတွေ့မှုပုံသဏ္byာန်အားဖြင့်မျက်နှာပြင်areaရိယာသည်တိုးချဲ့နိုင်သည်။ ဤအကာအရံများ၏စွမ်းအင်စုပ်ယူနိုင်စွမ်းသည်အခြားအကာအရံများထက်များစွာပိုသည်။
သင်္ဘောများအနေဖြင့်ကမ်းခြေသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်အချို့သောထောင့်များနှင့်သင်္ဘောနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ inflatable pneumatic အကာအရံသည်အခြားအကာအရံများထက်ရှိုသောအဆက်အသွယ်များနှင့် ပို၍ အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Yutung လေပင့်ကူများသည်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် (ခန္ဓာကိုယ်ofရိယာ၏ ၅၀% ကျော်) ရေပေါ်မျောနေသည်။ နှင့်ဒီရေအားဖြင့်, အကာအရံအနေအထားသင်္ဘောအနေအထားနှင့်ပတ်သက်။ ပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အထူးသဖြင့်, သင်္ဘောလှိုင်းတံပိုးနှင့်အတူယိမ်းတဲ့အခါ, ဆလင်ဒါပုံစံဖောင်းကာအနည်းငယ်ပွတ်တိုက်နှင့်အတူလှိမ့်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်ယံလွှာကိုပျက်စီးစေပြီးသင်္ဘော၏တုန်ခါမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
ဤရော်ဘာဖောင်းကာများကိုရေနံတင်သင်္ဘောများ၊ ကွန်တိန်နာသင်္ဘောများ၊ ရွက်လှေများ၊ ကမ်းလွန်ပလက်ဖောင်းများ၊ ကြီးမားသောသင်္ဘောကျင်းများ၊ စစ်ဘက်ဆိပ်ကမ်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။
ရိုးရာ elastic ရော်ဘာအကာအရံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ inflatable ရော်ဘာအကာအရံသည်အောက်ပါအားသာချက်များရှိသည်။
3. ကောင်းသော elasticity, ချုံ့အောက်မှာပုံပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
အဏ္ဏဝါ pneumatic အကာအရံ performace စမ်းသပ်မှု:
Attn.Pls ကျွန်ုပ်တို့သည်လေအိတ်များပြုလုပ်ရန်ကုန်ကြမ်းရော်ဘာကုန်ကြမ်းတင်ပို့သူဖြစ်သည်။ :
အကာအရံများ pneumatic application ကို:
အဖြေ: ISO CCS, BV, SGS စသည်တို့ကိုလက်မှတ်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အဖြေ - အာမခံကာလက ၂၄ လဖြစ်တယ်
သင်၏ရာဘာ inflatable fenders ၏သက်တမ်းကဘာလဲ။
အဖြေ: ကျွန်ုပ်တို့၏ရာဘာဖောင်းပွေးသောဒီဇိုင်းသက်တမ်းသည် ၆ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်ဖြစ်သည်
သင်၏ရာဘာဖောင်းပွမှု၏ MOQ သည်အဘယ်နည်း။
အဖြေ: ကျွန်ုပ်တို့၏ MOQ သည် 1PC ဖြစ်သည်
သင်၏ရော်ဘာဖောင်းဖောင်းများကိုစမ်းကြည့်ချင်ပါသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ဘယ်သောအခါမျှမသုံးပါ၊ မည်သို့အသုံးချရမည်ကိုမသိပါ။ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်ပါသလား။
အဖြေ - စိတ်မပူပါနဲ့။ ကျနော်တို့ရော်ဘာဖောင်းကာနှင့်အတူလမ်းညွှန်စာအုပ်ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်
6. ကျွန်ုပ်တွင်သင်္ဘောများရှိသော်လည်းရာဘာဖောင်းပွသည့်အရွယ်အစားကိုမည်သို့ရွေးရမည်ကိုမသိပါ။ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်ပါသလား။
အဖြေ - စိတ်မပူပါနဲ့။ Pls ကသင်၏သင်္ဘောအကြောင်းကျွန်ုပ်ကိုပြောပြပါ။ သင့်အတွက်သင့်တော်သောရာဘာဖောင်းပွသည့်အရွယ်အစားနှင့်ပမာဏကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုနိုင်သည်
7. သင်စက်ရုံလား၊ ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလား။
အဖြေ - ကျွန်ုပ်တို့သည် Qingdao တွင်တည်ရှိသောစက်ရုံကိုထုတ်လုပ်သည်
ရှေ့သို့ Monopile floating Polyurethane EVA Donut Fender
နောက်တစ်ခု: စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောထုတ်ကုန်များ Pneumatic Bumper - လေယာဉ်အတက်အဆင်းအတွက်လေအိတ်တင်ခြင်းမြင့်မားသောသယ်ဆောင်နိုင်သောသင်္ဘော - Haohang
ရော်ဘာ D ကိုအကာအရံ
အဏ္ဏဝါလေအိတ်များ, လေယာဉ်အိတ်, တရုတ်ရော်ဘာအကာအရံ, Composite ပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ရော်ဘာအကာအရံ, Tec သင်္ဘော,